Uphonswe emphandwini wamabhubesi, waphuma emoyizela eDe Reuck - Impempe
Uphonswe emphandwini wamabhubesi, waphuma emoyizela eDe Reuck
URishine De Reuck
Ukwethenjwa ngabaqeqeshi beMamelodi Sundowns ngendlela yokuthi bamqalise umdlalo onzima bekufana nokuphonswa emphandwini wamabhubesi kuRushine De Reuck osayine kuleli qembu laseChloorkop ngoJanuwari.
UDe Reuck udlale umdlalo wakhe wokuqala kwiMasandawana bebhekene nezinkunzi zaseCongo DR, iTP Mazembe emlenzeni wesibili.
ISundowns ibisanda kuyishayela ekhaya iMazembe ngakho beyize kuleli ivutha ingabaselwe ifuna ukuziphindiselela.
“I-TP Mazembe yiqembu elikhulu, banomlando omuhle kwiCAF Champions League futhi ukuqala umdlalo ibhekene nabo, usize iqembu kingangenelwa goli futhi liwine yinto enkulu kimi.
“Ibhola lasezwenikazi lihlukile kakhulu, izinga liphezulu kakhulu khona. Kuthatha nje umzuzwana ukujika izinto emdlalweni kulesi sigaba sebhola.
“Ngikujabulele ukuzihlola ngokubhekana nabanye babadlali abaphambili ezwenikazi, kukhomba ukuthi ngisendleleni efanele futhi ngokusizwa wozakwethu lapha, ngisazoya life,” kuchaza uDe Reuck.
Uthi usazibona enza kahle kule midlalo asayidlalile kwiBrazilians kwazise useke waze waqokwa njengoMdlali oVelele bebhekene beStelkenbosch mica nje.
“Ngijabule ngendlela engifaka ngayo isandla eqenjini, kumele ngobonge abaqeqeshi ngokungethemba kwabo. Akulula ukufika eqenjini usheshe uthole ijezi, yiqembu elikhulu leli elinenqwaba yabadlali abasezingeni eliphezulu.
“Kumnandi ukuba lapha futhi ngifuna ukuqhubeka ngifake isandla empumelelweni yeqembu.
“Ukuwina leya ndodo (yokuba nguMdlali oVelele) sibhekene neStellenbosch eKapa mine yinto enkulu kimi. Bekuwundlalo onzima, sakhombisa ukuthi siyakwazi ukulwa, sakhombisa ubuqotho ukuze siphume newini.
“Kumnandi ke nokunconywa uma wenze kahle futhi juyakukhulisa njengomdlali. Yize yatholwa yimi indondo, kodwa kwaba wumphumela olwelwe yiqembu lonke, okwakubalukeke kunakho konke amaphuzu amathathu,” kuchaza uDe Reuck obekwiMaritzburg United phambilini.
Previous Previous post: SHWII!: Muhle umsebenzi owenziwe yiMomentum kwikhilikithi yabesifazane
Next Next post: Usazokukwela ukuthola ijezi kwiBrighton uTau